Hayadda kormeerka iskuullada oo baari doonta baahida macallin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hayadda kormeerka iskuullada oo baari doonta baahida macallin
La daabacay tisdag 18 april 2017 kl 10.54
Heyadda Kormeerka iskuulka
Bidix: Xamsa, dhexda: Maxamed, midig: Cabdi qafaar
Heyadda kormeerka iskuulka (Skolinspektionen) ayaa kantaroolidoonta in ardayda dugsiga sare ay helaan saacadaha waxbarasho oo ay xaqa u leeyihiin. Heyadda ayaa ka warheshay marka uu macalin maqanyahay in ay ardaydu galaan cashar aan macalin joogin, aanuna u iman macalin kumeelgaar ah oo booska buuxiya.
Ardayada Moa Håll iyo Ajlinda Dosljak oo fasalka laba iyo tobanaad ka dhigta Kristinegymnasiet oo Falun ku yaal ayaa yiri in ay badanaa cashar aanan macalin joogin leeyihiin.
Waxay noqotay wax sanadadaan danbe aan la qabsanay, ayay tiri Moa Håll
Ma ahan wax fiican. Hadii aysan jirin dhaqaale la isticmaali karo lama heli doono macalin casharada kaa caawiya, taasna waxay sababi kartaa in uusan qofku ka gaarin iskoolka herkii looga baahnaa, ayay tiri Ajlinda Dosljak.
Maanta ma jirto warbixin caymaysan oo sawir ka bixini karaa hadii ay caadi tahay in ardayda dugsiga sare ay qaataan casharo oo macalin ku meel gaar ah ka maqanyahay, marka uu macalinkooda caadiga maqanyahay. Iswiidhana waxaa ka taagan macalin yari taasna waxay keeni kartaa in ay adagtahay in la helo macalin ku meel gar ah.
Labo sano ka hor ayay hayadda kormeerka iskuulladu ku sheegtay warbixin in 43% macalimiintu marka ka maqan yihiin xiisadaha ay ardayda u diraan howl gooni ah aanan markaas loo baahneyn in macalin ku meel gaar ah la keeno.
- Way fududahay markaas in wax kale la sameeyo, sida in la sheekeeyo iyo waxi la mid, ayay tiri Lina Helders.
Skolinspektionen waxay u aragtaa in arrinkaan uu yahay mid dhibaatadiisa leh, in casharka ay ardaydu macalin la’aan qaataan, saas awgeed ayay hay’adu u rabtaa in ay kantaroosho saacadaha waxbarasho oo dugsiga sare loogu talagalay.
- Way jiri kartaa halis in aanay ardaydu helin saacadha waxbarasho oo ay xaqa u leeyihiin. Hadii uusan iskoolku laheen nidaam ardayda saacadaha ka lumay gadaal uga soo celiso waxay keeni kartaa in uu ardaygu meeshaas ku waayo waxbarasho, ayay trir Ulrika Foss Rudbeck, ahna baare ka socota Skolinspektionen.
Ururka isku taga guud ee Macalimiinta (Lärarnas Riksförbund) waxuu aaminsanyahay in ardayda dugsiga sare dhigta in saacada go’an oo macalin dhigaayo la dammaanad qaado.
Waxaa ugu muhiimsan in macalin la heli karo xili walba. Anigane ma aaminsani in ay badato howsha goonida ah ee ardayda loo diro maadaama ay qaarna ka soo bixi karaan qaarna aanay waxba qabsan karin, ayay tiri Åsa Fahlén.